nova 7i ကို Budget Mid-range ဖုန်းလို့ ပြောရင်ကောင်းမလား?
၃ သိန်းခွဲတန် nova 7i ကို Budget Mid-range ဖုန်းလို့ ပြောရင်ကောင်းမလား?
HUAWEI nova 7i? တန်ဖိုးသင့် Mid-ranger လို့ ပြောရင်ပိုကောင်းမလား? ဒါမှမဟုတ် Kirin 710 တွေ ခြေရာချင်းလှိမ်နေတဲ့ ဖုန်းတွေကြားထဲက ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Rare Gem လို့ အမွမ်းတင်ရင်ကောင်းမလား?
ယုတ်စွအဆုံး ၃၆၉,၀၀၀ တန်ဖိုးက Price to Performance တန်းမှာ ညွှန်းပျော်၊ ရွေးပျော်တယ်။ ပထမဦးဆုံး Unit ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ HUAWEI Myanmar ကို ကျေးဇူးတင်လိုပြီး nova 7i မှာ ဘာတွေထူးခြားနေပြီလဲ? Impression နဲ့ ရှိုးကြည့်လိုက်ရအောင်
nova 7i still shines
Crush Green အရောင်ကိုက ကိုင်ကြည့်၊ စမ်းကြည့်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်တယ်။ ကိုယ်တွေအကြိုက်ဆုံး Emerald Green လို Color မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ဘဲခေါင်းစိမ်းရောင်ဆန်တဲ့ သူ့အစိမ်းက ကိုယ့် Second Favourite လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။
Glossy Crush Green Design
Camera Square ကလွဲရင် ကျောဘက်ဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းသလောက် Punch-hole နဲ့ ရှေ့မျက်နှာပြင်နဲ့ ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ Waterdrop Notch တွေထက်ပိုပြီး FullView ဖြစ်တဲ့ Feel ရတယ်။
but still with IPS LCD
6.4″ Display က 2020 မှာ မကြီး၊ မသေး အနေအထားလို့ ပြောလို့ရတယ်။ Display ဆိုမှ သူ့မှာ LCD Panel သုံးထားပေမယ့် Black Level က အားရစရာပါ။
A 6.4″ IPS Display
4,200 mAh Battery ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ လက်ထဲကိုင်ရ လေးမနေဘူး။ USB Type-C အပြင် Headphone Jack လဲ ထည့်ထားတယ်။ Fingerprint က ဖုန်းရဲ့ညာဘက် Power Button ပေါ်မှာ။ ဆိုတော့ nova 7i ကို Standard ပြည့်မှီတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင် ငြင်းနိုင်စရာမရှိလောက်ပါဘူး။
A Kirin 810!
Kirin 710 ထက် Performance ပိုင်း သိသိသာသာတိုးတက်လာတဲ့ ဒီ SoC ကို Huawei က စမိတ်ဆက်ကတည်းက Smartphone တွေပေါ် မြန်မြန်ရောက်လာဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။
လောလောဆယ် Benchmark Test တွေအရ ဒီ SoC ရဲ့ Performance ဟာ Snapdragon 730G, Mediatek Helio G90T တို့ Level နီးနီးမှာ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် GPU Test တွေမှာ ခါတိုင်းထက် ပို Smooth ဖြစ်တာကို သတိထားမိသလို Heat နည်းတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။
4,200 mAh ဆိုတာ ဒီဘက်ခေတ် Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးမှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပေမယ့် 40W Fast Charging ဆိုတာကြီးကတော့ ၄ သိန်းအောက် ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။
နောက်ပြီး Android 10 based ယူထားတဲ့ EMUI 10 ကလည်း စမ်းကြည့်သလောက် Energy Efficient ဖြစ်တယ် ပြောရမလားပဲ။ (အသေးစိတ်ကိုတော့ Full review မှ စမ်းပေးပါ့မယ်။)
တခြား Mid-range အတော်များများလိုပဲ Nova 7i မှာ Camera ၄ လုံးပါလာတယ်။ Main Camera က 48MP ကို f/1.8 နဲ့ပါ။ အဲဒါကိုမှ 8MP Ultra-wide, 2MP Depth Sensor, 2MP Macro Camera တို့နဲ့ တွဲပေးထားတယ်။
စမ်းကြည့်သလောက် Main Camera ရဲ့ ပုံထွက်တွေက Natural ဖြစ်တဲ့ Color ကို ပေးတယ်။ အကြိုက်မိဆုံး Camera Mode တွေကတော့ Night Mode နဲ့ Super Macro Mode တွေပါ။ ဒါ့အပြင် Selfie Camera အတွက် Night Mode သုံးခွင့်ပေးထားတာ သဘောကျတယ်။
Pro Mode သုံးချင်သူတွေအတွက်လည်း Shutter Speed ကို 30 Sec ထိ ပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ 16MP Selfie Camera ကလည်း သူ့ Level မှာ Sweet Spot လို့ ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားပါ။
Advanced AI Mode
သူ့ရဲ့ 48MP ပေါ် ချဥ်းကပ်ပုံကတော့ တစ်မျိုးရယ်။ 48MP ကိုမှ AI Ultra Clarity mode ဆိုပြီး Resolution Setting ထဲ သပ်သပ်ထည့်ပေးထားတယ်။ ဒီ Mode နဲ့ရိုက်ပြီဆို စက္ကန့်ပိုင်း မဆိုစလောက်စောင့်ရတယ်။
စမ်းရိုက်ကြည့်သလောက် အလင်းကောင်းတဲ့အချိန်ဆို Color မှန်ပြီး 12MP ထက် အတော်လေး Detail ပိုကျန်အောင် Crop လုပ်လို့ရတာ သတိထားမိတယ်။ ခရီးအထွက်များတဲ့သူတွေအတွက် ရှုခင်းတွေရိုက်တဲ့အခါမှ အတော်အသုံးဝင်မယ့် Feature လို့ ကိုယ်တွေတော့မြင်တယ်။
Huawei အနေနဲ့ Nova 7i လို Mid-range phone တစ်လုံးမှာ Camera Feature တွေကို စုံစုံလင်လင်ဖြစ်အောင် ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ ခါတိုင်းထက် Camera ပိုင်းကို ပိုအားစိုက်ပေးထားတယ်ဆိုရမှာပဲ။
nova 7i! A worthy of Choice?
အပေါ်မှာပြောခဲ့အချက်တွေကို ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ချိန်ဆကြည့်ရင် စဥ်းစားရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေလောက်ပြီထင်ရဲ့။ ဒီတစ်ခေါက် Huawei ရဲ့အရွေ့ကို စေတနာပါတယ်လို့ ကိုယ်တွေတော့ သတ်မှတ်တယ်။
A Punch-hole notch is smaller
ဒီတော့ ခင်များတို့ရော Nova 7i နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသိချင်လဲ၊ Comment မှာ ဝင်မေးသွားနိုင်ပါတယ်။ Full Review ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး Detail ကျအောင် လုပ်ပေးမှာမို့ Stay Tuned ပါ။
HUAWEI nova 7i Homepage
Galaxy S20 စီးရီးတွေက ၂၀၂၀ မှာ အောင်မြင်မှုပေးနိုင်မလား? Samsung ဖန်တီးချင်တဲ့ ၂၀၂၀ အနာဂတ်ဆိုတာဘာလဲ?